Ciidanka nabad-sugidda qaranka oo maanta fashiliyay qarax miino oo lagu aasay isgoyska caan ah – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Ciidanka nabad-sugidda qaranka oo maanta fashiliyay qarax miino oo lagu aasay isgoyska caan ah
Ciidanka nabad-sugidda qaranka ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta fashiliyay qarax miino oo lagu aasay isgoyska H/wadaag ee magaalada Muqdisho, kadib markii qaar ka mid ah dadka shacab ah ee ku nool halkaasi ay ciidankaasi ku wargeliyeen.
Ciidankaasi oo markii dambe soo gaaray isgoyska H/wadaag ayaa dadka shacabka ah ka ceryiyay goobta lagu tuhunsanaa inay miinadu ku jirto, waxaana dhacday in daqiiqado kadib ay qaraxday miinadii halkaasi ku aasnayd, iyadoo aan wax qasaare ah geysan.
Saraakiil ka tirsan kuwa nabad-sugidda qaranka oo la hadlay warbaahinta Bulshoweyn ayaa u sheegay in qaraxa lagu aasay goob ay dadka iyo gaadiidka aad ugu badan yihiin oo ku yaala isgoyska H/wadaag.
Sidoo kale, saraakiishaasi ayaa inoo sheegay in ciidamada nabad-sugidda lagu soo wargeliyay miinada lagu aasay nawaaxiga isgoyska H/wadaag, iyadoona markii dambe la xaqiijiyay in qaraxa uu dhacay iyadoo la faarujiyay aagga ay miinadu ku jirtay.
“Ciidanka nabad-sugidda ayaa goobta gaaray kadib markii lagu soo wargeliyay in qarax lagu aasay nawaaxiga isgoyska H/wadaag, waxayna markaasi kadib kala ceyriyeen dadkii halkaasi ku sugnaa, Ilaahay mahadiis, ma jirto wax qasaare ah oo qaraxaasi ka dhashay” Sidaas waxaa yiri mid ka mid ah saraakiisha dowladdda Soomaaliya oo inoo warammay.
Ilaa iyo haatan lama oga cidda sida rasmiga ah miinada ugu aastay agagaarkaa isgoyska H/wadaag, waxaana inta badan qaraxyadda ceynkaan oo kale xilliyada ay qarxaan qasaare xoogan kasoo gaartaa dadka shacabka ah iyo kuwa xoogsatada ah ee ku sugan goobahaas.